काठमाडौं : लामो समयदेखि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको चर्चा शुरु हुनासाथ मन्त्री बन्नका निम्ति अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’माथि दवाव दिनेहरुको संख्या ठूलै थियो । मन्त्रीमण्डल केही पुनर्गठन कहीले हुन्छ भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री ओली बाहेक अरुले भेउ पाउन सकेका थिएनन् । तर, जिल्लादेखि विभिन्न नेताहरुमार्फत मन्त्री बन्नका निम्ति सांसदहरुले चर्को दवाव सृजना गरेका थिए । उता कार्य क्षमतामा असफल भएको भन्दै कतिपय मन्त्रीहरु हटाउने सूचीमा रहेको भन्दै समाचारहरु पनि आए । यसरी समाचारहरु बाहिरिएपछि मन्त्री पदमै टिकिरहने केही मन्त्रीहरुले ठूलै कसरतसम्म गरे ।
मन्त्रीमण्डल कहिले पुनर्गठन हुन्छ भन्ने यकिन नभइरहेको बेलामा गत मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन गर्ने बताएपछि पदमुक्त हुने लिस्टमा रहेका मन्त्रीहरु टिकिरहन र मन्त्री बन्न चाहनेहरुको चर्को दौडधुप शुरु भएको थियो ।
मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने तयारीका विषयमा अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेताहरुसँग पटक–पटक परामर्श गरेका थिए । पूर्व एमालेबाट मन्त्रीमण्डलमा समावेश हुने र हटाउने विषयमा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र महासचिव विष्णु पौडेलसँग परामर्श गरेका ओलीले पूर्व माओवादीबाट मन्त्रीमण्डलमा समावेश गर्ने र हटाउने सूची अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग मागेका थिए ।
बुधबार मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन भयो । हिजो नवनियुक्त मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरुले सपथग्रहण गर्दै कार्यभार समेत सम्हालिसकेका छन् । तर, गत मंगलबार र बुधबार दिनभरी हटाउँने र नयाँ बन्ने मन्त्रीहरुको नाम सूची पटक–पटक काटकुट हुन पुग्यो । अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड कुन–कुन मन्त्रीलाई हटाउने र क–कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा टुंगो लगाउन हम्मेहम्मे भएको थियो । नेकपा स्रोतका अनुसार नेताहरुले दवाव थेग्न नसकेर पटक–पटक काटकुट गर्नुपरेको थियो ।
मन्त्री हुनका लागि नेकपाका सांसदहरु शीर्ष नेताहरुको निवासमा पुगेर लबिङ गरे । थोरै सफल भए त धेरै असफल भए । कतिपय वहालवाला मन्त्रीले आफ्नो पद जोगाए भने कतिले जोगाउँन सकेनन् ।
प्रधानमन्त्री शुरुमा १० जना मन्त्री हटाएर त्यतिकै संख्यामा नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरेका थिए । कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार काम गर्न नसकेपछि असफल भएका मन्त्रीलाई हटाएर प्रभावकारी काम गर्न सक्ने क्षमता भएका नेतालाई ओलीले मन्त्री बनाउन खाजेका थिए ।
उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री मातृका यादव आफू हटने निश्चित भएकै कारण तत्कालिन मन्त्रीपरिषदको अन्तिम बैठकमा सहभागि भएनन् । उनले आफूलाई जोगाई दिनका लागि नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेका थिए । तर, उक्त भेटमा सकारात्मक जवाफ आफू हटनेमा उनी ढुक्क थिए ।
त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठ पनि मन्त्री टिकिरहन विभिन्न शक्ति मार्फत नेताहरुलाई चर्को दवाव दिएका थिए । उनी आफैपनि नेताहरुलाई भेटघाट गर्ने लामै कसरत गरे । तर त्यो कसरत सफल भएन । तत्कालीन उद्योगमन्त्री यादव हटाउने सूचीमा थिए भने महासेठ कहिले हटाउने सूचीमा कहिले नहटाउने सूचीमा परिरहे । अन्ततः उनी हटने सूचीमा परे ।
समान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्रीमा टिकिराख्न लालबाबु पण्डितले नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई गुहार मागेका थिए । तर नेपालले उनलाई जोगाउन सकेनन् । गत मंगलबार साँझ तयार भएको सूचीमा महासेठ र पण्डित नहटाउने सूचीमा रहेका थिए । तर, बुधबार अपराह्न उनीहरु हट्ने सूचीमा परे । अन्ततः कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार काम गर्न असफल रहेको भन्दै पण्डित हटाइए
५ देखि १० मन्त्री फेरिँदै, फालिने र भित्रिनेमा को-को परे ?
कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री चक्रपाणि खनाल र महिला, बालबालिक तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापा शुरुदेखिनै हटाउने सूचीमा थिए । कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएका खनाल र थापालाई पहिलेदेखिनै प्रधानमन्त्री ओलीले हटाउने सोच बनाएका थिए । त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले पर्यटन राज्य मन्त्रीबाट धनबहादुर बुढा र कृषि राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीलाई पनि हटाउने सूचीमा राखेका थिए । समाजवादी पार्टीसँग असन्तुष्ट रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवलाई हटाउन खोजेका थिए । तर, अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको आग्रहमा यादवलाई कानुन मन्त्री बनाइयो भने राज्यमन्त्री यादवलाई प्रधानमन्त्री ओलीले हटाए ।
त्यस्तै श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टलाई हटाउने कि राख्ने भन्ने विषयमा लामो छलफल भएको थियो । अन्ततः उनी हटाइए । पहिला तयार पारेको सूचीमा यादव, खनाल, पण्डित, विष्ट, थापाका साथै युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माको नाम थियो । त्यसबेला महासेठको नाम परेको थिएन । पछि विश्वकर्माको हटाएर महासेठको नाम थपिन पुग्यो । त्यसोत शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेललाई पनि हटाउने वा जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । उनको ठाउँमा अञ्जना विसङ्खेलाई ल्याउने सम्मको कुरा भएपनि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको आग्रहमा पोखरेलको जिम्मेवारी यथावत रहन पुगेको छ ।
त्यस्तै खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री विना मगरका विषयमा पनि लामै समय माथापिच्ची चल्यो । अन्ततः उनलाई प्रचण्डको दवावमा हटाइएन । प्रधानमन्त्री ओलीले मगरलाई हटाउने सोच बताएपनि प्रचण्डले मगरका पद जोगाइदिए । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई हटाउने कि राख्ने भन्ने विषयमा पनि अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच छलफल चलेपनि अहिले उनलाई नहटाउने निष्कर्षमा पुगेका थिए । दुई अध्यक्षबीच मन्त्री हटाउने र बनाउने विषयले तनाव हुँदा पूरै सेट परिवर्तन गर्ने कि भन्ने कोणबाट पनि छलफल चलेको बताइन्छ ।
यता मन्त्री हुनेको लिस्ट बन्दै गर्दा दिनभरी नेताहरु तनावमा थिए । पटक पटक बनेको लिस्टबाट कोही हटाईए भने कोही मन्त्री बन्न सफल भए । हृदयेश त्रिपाठी, घनश्याम भुसाल, बसन्तकुमार नेम्वाङ मन्त्री बन्न सफल भए । त्रिपाठी र भुसाललाई मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्रीले नै रुचि देखाएका थिए भने नेम्वाङलाई पूर्व सभामुख सुवाष नेम्वाङले दवाव दिएका थिए । मन्त्री बन्न प्रधानमन्त्रीले गरेको आग्रहलाई उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले अस्वीकार गरेपछि नेम्वाङको भाग्य चम्किन पुगेको हो । उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले मन्त्री पद अस्वीकार गरेपछि नेम्वाङ र अर्का सांसद विजय सुब्बाको नाममा छलफल भएको थियो ।
त्यस्तै काठमाडौं उपत्यकाबाट पम्फा भुसाल, कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ र महेश बस्नेतमध्ये एकलाई मन्त्री बनाउने सोचमा पुगेका प्रधानमन्त्री ओली अन्तिममा पार्टीका वरिष्ठ नेता बामदेव गौतमले चर्को दवाव दिएपछि रामविर मानन्धरलाई राज्यमन्त्री बनाउन पुगे । मानन्धरले गौतमलाई सांसद बनाउन आफूले राजीनामा दिने घोषणा गरेका थिए । त्यसैको गुन तिर्न गौतमले दवाव दिएका थिए ।
नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले शुरुमा उद्योग मन्त्री यादव र कृषि मन्त्री खनाललाई हटाएर उक्त ठाउँमा देबेन्द्र पौडेल र प्रभु साहलाई मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सूची दिएका थिए । तर, भोलिपल्ट उक्त सूची सच्याउँदै प्रचण्डले लेखराज भट्ट र रामेश्वर राय यादवको नाम दिए । अध्यक्ष प्रचण्डले राज्यमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएपनि इन्दु शर्मालाई अन्तिममा मन्त्री बनाइएन ।
त्यसैगरी नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले सांसद जीवनराम श्रेष्ठको नाम प्रधानमन्त्रीलाई टिएपनि श्रेष्ठ मन्त्रीको सूचीमा परेनन् । पार्टीका अर्का वरिष्ठ नेता माधव नेपालले सांसद कल्याणी खड्कादेखी सोम पाण्डेसम्मको नाम मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए । तर, त्यो आग्रहको सुनुवाइ पनि भएन । युवा तथा खेलकुद मन्त्री विश्वकर्मालाई हटाएर छबिलाल विश्वकर्मालाई मन्त्री बनाउने महासचिव पौडेलको प्रस्तावपनि स्वीकृत हुन सकेन । महिला मन्त्री थापालाई हटाएपछि जनजाती कोटाबाट अन्तिममा पार्वत गुरुङको इन्ट्रि भयो ।
नेकपाबाट मन्त्री हुनका लागि लबिङ गरेका र चर्चाका रहेका सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा, देवेन्द्र पौडेल, प्रभु साह, जीवनराम श्रेष्ठ, राजेन्द्र गौतम, विशाल भट्टराई, प्रेम आले, किसान श्रेष्ठ, गणेश ठगुन्ना, महेश बस्नेत, कष्णगोपाल श्रेष्ठ, सोमप्रसाद पाण्डे, छविलाल बिश्वकर्मा, कल्याणी खड्का, लिला श्रेष्ठहरुको नाम मन्त्रीको सूचीमा अटाउन सकेन ।
मन्त्री बनाउने र हटाउनेको सूची बनाउने गृहकार्यमा जुटेका शीर्ष नेतासमेत दिनभरी तनाव खेपेका थिए । घरी कसको हटाउने घरी कसको राख्ने भन्ने दिनभरीको तनाव खेप्दै अन्तिम घडीमा नामावली टुंगो लाग्यो । राती राष्ट्रपति कार्यालयमा नामावली पठाएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले पुनर्गठित मन्त्रीपरिषदको नामावली प्रकाशन गर्यो । द नेपाल टप